KOMBUUTARKA | Technology Computer Articles Global WebSite.WS | GVMG - Global Viral Suuq-Group
Technology Computer Articles Global WebSite.WS > KOMBUUTARKA
barnaamijyada helitaanka Remote waa usefull oo hufan siyaabo badan oo. Diirada ugu weyn ee technology waa in asal ahaan ka dhigi xafiiska meel la heli karo in uu leeyahay internet ah.
The Waxa Ayidaya iyo Diidaya Satellite TV Waayo, PC
Bluetooth: Magic The Of Wireless Technology
technology Bluetooth ay magaca ka Harald Viking Boqorka Bluetooth ee Denmark helay, kuwaas oo ahaa caanka ah inta lagu guda jiro waqti uu uu xirfadaha dhexdhexaadinta fiican. Waxa uu ku xiran dad badan oo oo waxaa u bogi rag uu tayo this. sidaa, marka technology la Been abuurtay, magaca ku xayiran. Tani technology silig free awood xulashada kala duwan ee qalabka si ay u awoodaan in ay is dhaafsadaan macluumaadka iyadoo la kaashanayo 2.4 calaamadaha radio GHz-ruxruxo gaaban gudahood kala duwan oo ka mid ah ilaa 120 cagaha. Qalabka l ...
Linux On Desktop The?
Linux waa "il furan" nidaamka hawlgalka asal ahaan horumariyo by injineer ka Finland magacaabay Linus Torvalds. Linux la sii daayey hoos version hore of GNU ah "License Dadweynaha Guud", ama GPL, by taas oo wax user in doonayay in ay la shaqeeyaan Linux xor ah inay sidaa sameeyaan. In kastoo ay uga ayaa waxaad fartaan Wannaagga sanadihii la soo dhaafay, waxaa weli si qorrax madoobaad caanka ah ee nidaamka qalliinka Windows Microsoft ee macaamiisha iyo weynba heerka ganacsiga- oo waxaa laga heleyaa "desktop" computer ...
Google Earth News – Beta kale oo ah in la Qaado Your neefso Away
Google Earth Dib : Marka aad aragtay this, aad;baahida loo qabo ll 5 daqiiqo in ay dib u helaan aad neefta! Markaas waxaad ku Socda karaa.
Maxaa la raadiyo marka Doorashada A Company Kaydinta Data
In warshadaha computer shirkadaha waaweyn ayaa loo isticmaalo dhinac saddexaad oo ay ku kaydiso koobiyada faylasha iyo software in ay dhacdo musiibo computer ballaaran a. Maalmahan la horumarka ee internet-ka oo kordhay awoodaha bandwith waxaa jira shirkado yaryar iyo xitaa dadka isticmaala qoyska, in loo baahan yahay adeegyada la midka ah iyo shirkadaha ku dhan dabamariyay ilaa internetka oo u oggolaan doonaa inaad geliyaan xogta ah in aad doorato waqtiyada in aad doorato oo ku kaydinaysa kuwa ...
Qarsoodiga Camera PSP Soo Bandhigtay!
Ipod Oo iTunes – Friends Or cadaawayaashaada?
Inkastoo sida user saaxiibtinimo iTunes waa, waxaa ahaatee caddayn karaan khatar dhab ah in ururinta music kaydiyaa on your iPod ah. Ka hor leh wax kasta oo kale, inta kale xaqiijiyay in ay jiraan tallaabooyin aad qaadi karto si aad muhiimad baabi'iyo khatarta this, laakiin haddii aad sii default goobaha iTunes, khatarta sii joogi doonaan. Muuqaalkii u horeeyay iTunes siinayaa waa in aad u fudud oo si sahlan ay u isticmaalaan software si ay u iibsadaan music online. Waxa kale oo ay server sida maktabad leh tiro aad u badan oo ah data music sidoo kale ...
Dr. Software caawin kartaa PC Healthy Hayso
Waxaa jira waxyaabo badan oo saamayn kartaa kumbiyuutarada waxqabadka. From fayrusyada iyo spyware in khaladaad qarsoon oo ka maqan files codsiga, halkaas innaba dhammaad ma ku dambiilayaasha suurto gal ah in laga yaabaa in hoos u gaabis your computer. Si aad u hesho wax kasta oo ka mid ah mujrim aad qaadan karto saacadood ku dul saacadood oo raadinaya wadid aad u adag oo laga yaabo xataa in aadan guul. Added in in, waa xaqiiqada ah in ay jiri karaan in ka badan 200 sababta aad computer waxaa uma muuqdaan sida waxa loo isticmaalaa in lagu. Iyada oo tirada l ...
Bluetooth Tixgelinnada Iibsiga headset rikoor
Raacitaan la ruxruxo ee cusub ee, item kulul farsamada ee qarnigii hore 21-kii ma joojin la headset ah rikoor Bluetooth. Hadda, awoodaha Bluetooth bixiyaan adeegyo dheeraad ah iyo qalab badan abid ka hor, oo ay ku jiraan headset ah rikoor Bluetooth. Marka raadinaya headset rikoor ah, noocyo badan oo waaweyn bixiyaan doorashada fiican, laakiin midkoodna si fiican falay sida kuwa ay bixiyaan Motorola. Motorola waxaa hogaanka marka ay timaado la dhigaayo qalabka soo jiidasho iyo spiffy tahay in la dhamaystiro w Bluetooth ...
Alaabada aad Windows network iyo aad u hesho warar cad!
Taliyaha Inventory PC badbaadiyay waqti iyo u baahan tahay maalgelin aad u hooseeya on software iyo hardware baaritaanka la celinta weyn iyo kayd. Waxay leedahay wax kasta oo aad u baahan tahay alaabada computer wax ku ool ah. Taliyaha Inventory PC si toos ah su'aalo dhan kombiyuutarada aad network iyo warar dib u faahfaahinta ku saabsan OS iyo hotfixes, software rakibay iyo hardware, socda geedi socodka iyo adeegyada, hantida cusub in muuqan, -Xaq on-time qaylodhaan network iyo isbarbardhigga muuqaal ah febwari. Iyada oo sifooyinka oo dhan waxaa ka mid ah, Taliyaha Inventory PC ka dhigaysa hubinta PC neecaw!
Cisco CCNA Tutorial Exam: Loopback Interfaces
Waa maxay sababta loo isticmaalo loopback interfaces? Baro faahfaahinta in this tutorial Cisco CCNA ka Chris Bryant, CCIE #12933.
10 Talooyin Si Shopping Waayo, Daabacado
$Tixgeli DPI ku madbacadaha (dhibco per inch) awoodda, taas oo ah xalka ugu taas oo daabacan kartaa sawiro iyo waraaqaha. DPI The sare (dhibco per inch) aad leedahay, tayada fiican waxaad yeelan doontaa in labada qoraal ama sawir printouts.
Dad badan ayaa si fudud u tag dukaanka tafaariiqda iyo aad u iibin jireen inay marka ay timaado qalabka kombiyuutarka. Waxaad noqon doono mid aad u la yaabay sida fudud u waxaad ka qaadan kartaa oo dhan ka kooban asaasiga ah oo naftaada soo shirin ama aad u hesho saaxiib ama xubin qoyska ee ogaada inuu kuu sameeyo.
Iska ilaali Loss Data Inta lagu jiro Biriq oo kornto
ComputerBatteries waxaa talisa in si looga fogaado khatarta ah in laga badiyay xogta, waa in aad iska dhawra dawladaha digniinta hawo kulul hadda iyo ilaalinta qalabka IT ee xafiiska.
Qorka Hard Drive Recovery
Our bulshada had iyo jeer waa on dhaqaaqo; sidaas darteed waa yaab ma laha in kombiyuutarada mobile waa qalab doorashada lacag geliya maanta oo welina. wararka iibka PC badan ayaa shaaca ka qaaday in dad badan oo ka isticmaalayso laptops ama kombiyuutarada buugga sannad kasta. Tiro ka mid ah sababaha ay gacan habkani sii kordhaya. technology ka dambeysa iyo kombiyuutarada buugga gudahood waxaa horumarinta at xawaaraha cajiib ah, iyo isbedelada la ogaaday la model kasta oo cusub in dhufan suuqa. noteboo The ...
Qorka Xasuusta Computer – Casriyaynta Your Laptop
Waxaa jira noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan oo xasuusta, iyo waxa muhiim ah in aad doorato xasuusta in jaanqaadi computer buug aad.
Nadiifinta Your Diiwaanka Oo Kordhinta Computer Speed
nadiifiye Diiwaanka waa software ah in kor nadiifiyaa diiwaanka of computer ah in ay tayadoodii ay waxqabad iyo falkaasi. Diiwaanka waa meesha on computer ah, halkaas oo xogta muhiimka ah ee ay qaabeynta iyo barnaamijyo ku rakiban yihiin kuwa badbaadayaa si ay awood nidaamka qalliinka u leh adeegsiga isku mid. Waa applet ah gudahood pack ee nidaamka qalliinka. Waxaa xajiya log ah oo ka mid ah hawlaha P.C ah. iyo in si wanaagsan loo liiska hada ka updated jeeg liiska waxqabadka of th la barbar dhigo karo ...
Ma Your PC jiidhaya Your Desk?
Marka aad PC cunaa ilaa ku dhowaad meel bannaan oo idil in miiska computer aad, ay waqti u leedahay in yar dib-u-abaabulka. kombiyuutarada desktop, gaar ahaan kuwa CPUs weyn iyo kormeerayaasha cuni kari ilaa meel xad ah oo ay noqon kartaa qolka daruuriga kale sida stackers folder, telefoon ama fakis mishiin. Maalmahan, kombiyuutarada shakhsi weyn wuxuu noqon karaa run ahaantii culus indhaha, gaar ahaan tan iyo technology Sargaalkan, odhaahda, bulk baxay waa, khafiifka ah ee waa waa caadiga ah.
Verizon FiOS TV Miyuu Degay
Qubitaanka kumbiyuutarada Old ma aha “PC”
According to the U.S. Envirnonmental Protection Agency, nearly 250 million computers will become obsolete in the next five years. Nasiib darro, less than 20 percent of PCs retired in the U.S. are recycled most years, instead creating what is being termed "e-waste."
MAC vs PC – Waa kuwee waa computer ugu fiican ee ganacsigaaga guriga?
Maxaad dadka jecel kombiyuutarada MAC si eey-on badan? ay dhab ahaantii doorashada ugu fiican ee ganacsi guri?
Laptop Advanced Maanta vs. PC Desktop ah
Sidee laptop maanta barbar PC desktop-ka?
A Guide magacdaray Si MICR Oo Associated Technologies
Khad magnetic Aqoonsiga Character (MICR) waxaa lagu horumarinaayo ku isticmaalidda faa'iidooyinka technology computer in industry bangiyada. Ka hor inta isticmaalka line MICR a, Jeega kala sooca by tirada account ahayd geedi socod gacanta laga. Laba hababka hore loo isticmaalaa in lagu qabto tirada badan ee jeeg baaraandegi in industry bangiyada: Sort-A-Matic iyo Top Tab Key Sort.
Su'aalo More Si Weydii A Dugsiga Tababarka Computer hor inta Bixinta
Go'aanka ah in ay dhigtaan dugsiga farsmada computer ka waa mid muhiim ah, sidaa darteed waa in aad isweydiisid su'aalaaha soo hor sidaas samaynaya. dheeraad ah oo ka mid ah su'aalaha laga Chris Bryant Baro, CCIE #12933.
Si dhakhso ah Abuuri One Inventory Network
Ma rabtaa in aad gacanta ka mid ah hardware iyo software on shabakadaha aad, Waxa si fudud oo si deg deg ah waa, qaar ka mid ah software Inventory Network waxay kaa caawin kartaa. caawimo software Kuwani aad u hesho macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan OS ah, baakad adeegga, rajeenayo kulul, hardware, software, iyo ordaya geeddi on Kombuutarada fog. Waxaad isticmaali kartaa software Inventory Network si Raadi iyo hardware track iyo software ka badan shabakadaha LAN ama WAN, in lagu wargeliyo marka isbedel ku dhacaan Hantida IT in aad maamuli, streaml ...
Mouse Hunt Aan The Movie (Doorashada Perfect Mouse The Waayo, Computer)
Computer Mouse its something you wouldnt run away from. Halkii, it is the one thing you would search for. Dhab ahaan, every body is in search for a good one. And it has actually become a not-so-easy task to hunt for a good mouse for your pc.
My PC Miyuu adware, Maxaan samayn laheyd?
I TGS ya sheegi, marka ugu horreysa waxaan ka helay my computer marka ay ahayd brand cusub, waxaa shaqeeyay sida soo jiidashada ah! Markaas sidii aan wax yar ka helay more caan ah u leh, saaxiibada iyo qoyska soo jeediyay in aan isku dayo inaan qaar ka mid ah codsiyada online. Mid ka mid ahaa this daanyeer cute guduud oo kaa caawin in aad isticmaalaysa shabaqa.. ama si aan ku fikiray.
Spyware uu noqday dhibaato ammaanka computer ugu caansan. Sidee baad u dooran a qalab u qaadidda spyware wanaagsan? Iska jira software antispyware oo rakibtay spyware / adware in aad computer. Spyware waa barnaamij software qarsoon. Waxaa inta badan loo isticmaalaa si ay ula socdaan dhirta iyo shopping ah caadooyinka dadka isticmaala computer. Spyware sidoo kale noqon kartaa barnaamijka fog gacanta in wax xado bangiga si qarsoodi ah iyo macluumaadka shakhsiyeed. Spyware ayaa si deg deg ah u noqdaan securi internetka ugu caansan ...
Waa kuwee taasoo; Laptop Cheap ama Desktop Cheap?
doorashada xaq u daabacaadda dhexdhexaad ah
Sida xiriir Internet noqon more joogto ah la helaan broadband, software awoodaan in ay umuuruhu galay dhexdhexaad ah oo wax ku ool ah oo shakhsi ahaan doonaa. Currently, baxsad software ka drives adag ugu baahan yihiin iyo goobaha bedeli gaadmada ah nidaamka our, marar badan hoos u kombiyuutarada our. Maxaa yeelay, software degan meel iyo processing awood, waxaa jira qadar kooban oo software in ordi karaan in kumbiyuutarada our. Dhinaca ganacsiga, nidaamka software hadda u baahan co badan ...
technology ayaa haatan xawaare gantaal, laga yaabaa inaad ka heli doonto wax ka badan oo gaar ah - technology ka sii horumarsan maalintii labaad ee computer iibsaday. Waxaad dareemi kartaa computer aad hadda la isticmaalayo waa yar dhacsan, ka xumahay haddii aad isticmaalayso PC cusub laakiin markaas aad. Waxaa suurtogal ma aha inta badan oo naga mid ah si ay u sii beddelo kumbiyuutarada jir la mid cusub.
Baaritaanadii u danbeeyay ayaa muujinaya in 9 ka mid ah 10 Kumbiyuutarada waxaa qaba Spyware
Aqoonsiga Oo Fahmaan Home Networking Kooban
Kaararka Memory – Oo isu Kaydinta Media Waayo Qalabka Digital
Technology Advanced The Of The PC Tablet Toshiba
Sameynta Daabacashooyinka Digital Sawir
Inta lagu jiro marxaladda kala guurka ah ee analog in sawir digital, qof kasta og yahay farqiga u saabsan sida kasta images la farsameeyo galay print a nice. Waayo, sawir analog, negative ah (film) waxaa lagu horumariyaa galay photos in dukaamada yar oo lagu magacaabo istuudiyaha soo koraya, -Dhamaadka yar ama dhamaadka sare, laga heli karaa qaar ka mid ah ka fog aasaaska u dhow Socon. Waxay ku yimaadaan qiimo jaban dhul kasta oo ka mid ah tallaalka, laakiin way ka soo bixi qaalisan duub. Tani waa habka caadiga ah ee dhammaynaya sawir. Maalmahan ...
antivirus Software – A Waa-leeyihiin Protection Waayo Computers
Iyada oo agaa of fayrusyada computer ka mid ah nooc kasta, rakibaadda software antivirus in kumbiyuutarada uu noqday lagama maarmaan ah. koobnaadaan software antivirus barnaamijyada computer oo ku dadaalaan si ay u aqoonsadaan fayrusyada iyo TROJAN ' (software kale xaasidnimo ah), leexiyo dayada iyo u wada ducaysay baabi'iyo. About Adda Software barnaamij software antivirus ugu iman karto rakibay on your computer ama laga yaabaa in lagu iibsaday oo lagu rakibay aad by. Waxaa jira xad ah 'duulay' yar ka dhanka ah whi ...
Baro VoIP Oo Ku raaxayso Jidka New The Of Isgaarsiinta
A cusub gaar MultiCore antivirus & wax soo saarka AntiSpyware
NuWave Software ku dhawaaqay in la sii daayo MultiCore antivirus & AntiSpyware, wax soo saarka anti-virus kacaan in midaynaysa afar matoorada anti-TROJAN.
Waxa run ahaantii waa Behind kumbiyuutarada Your Performance Poor
ILAALI computer ah habsami leh oo si deg deg socda waa shaqo aan dhamaanayn. Waxa ay u muuqataa sida wax waqti ah ka dib markii aad ka soo box qaad PC brand-cusub, your computer bilaabo kor ku simaha iyo fulinta sida PC hore aad helay takhaluso ka badan hal cusub waxaa la moodayay in ay noqdaan. Iyada oo ay tani waa mid aad u niyad-jab, waxaa looga hortegi karaa haddii aad ogtahay waxa keenaya kumbiyuutarada waxqabdkaaga liita iyo sida loo xaliyo dhibaatooyinka xagga dambe ka gaad ama iyaga looga fogaado in meesha ugu horeysa.
Computer Fayrus: Guudmarka
Instant Access Remote Desktop ganacsiga iyo Personal Isticmaal
Just dhawr sano ka hor, waxbarashada web-ku saleysan dhex kumbiyuutarada loo arkay inay kacaan. Shirkadaha gelin kara hanuunin iyo tababarro joogto ah on line iyo shaqaalaha oo dhan heli lahaa waxbarashada caadiga ah. Soon, la faafidda wifi, router-ku saleysan, iyo shabakadaha wireless satellite, dadka ka jaftaa karo noocan ah tababarka halka baxsad. iibiyaha A aad u tababaran ayaa laga yaabaa in soo jeedinta dambeeyay marketing halka fuushan diyaarad iyada ama uu caga soo socota si ay. Ama Coun qof ...
Adobe Photoshop Tool Qaabab
Ayaa qarka u saaran Deadline ama Sida loo abuuro Project Design in One Day
Cable Tv Broadcast Stations Oo waxbo kuma Taasi Circle The Earth
Cisco CCNA / CCNP Home Lab Tutorial: Kaybalka Server Access Your
Waa maxay VLAN a?
Gudbinta Software: Shaqee ku guulaystaan
Talooyin Waayo Iibsiga inkjet Catridges
Software Management Times: Maamulka Better Of Accounts Member
The Isticmaalada badan ayaa Of All An In One Printer
Abuuritaanka A Liiska Habka Qabsashada Data CRM
Samee Life Easy Iyadoo Universal kontoroolha Remote
Money iyo badbaado waqti talooyin tarankooda DVD